Mazano Okuchengetedza Vafambi muTrujillo, Peru
Guta reTrujillo ine mukurumbira usina kunaka wekuti uve umwe wemaguta asingachengeteka muPeru. MunaOctober 2011, El Comercio , rimwe remapepanhau anoremekedzwa zvikuru muPeru, akakumbira 1 200 vaPeruviya zvavakafunga kuti ndiyo maguta matatu anotyisa munyika. Chiverengero chevanhu vakabvunzwa chakanga chiri chiduku, asi migumisiro inowanzoratidza kuratidzwa kwemaitiro ehupfumi nekuchengetedzwa kwevanhu mumaguta ePeruvia.
Maguta akaonekwa kuti akanga asina ngozi kune Lima (75%), Trujillo (52%) uye Chiclayo (22%).
Trujillo Yakachengeteka Sei?
Kana iwe ukakumbira muvhareji yePeruvia nezvekuchengetedzwa muTrujillo, unogona kunzwa mamwe mhinduro dzinonyadzisa. Unogona kunzwa izvi:
Iyi nzvimbo yehutongerwo hwehutano hwakarongeka
Mafia-esque gangs vanomhanyisa uye vanodzivirira mabhizinesi pakati pebhizimisi vemo
Zvombo zvakagadzirwa zvinowanzoitika
Mabhazi, kusanganisira mabhazi ekufambisa, dzimwe nguva anochengetwa neboka rehondo
Nhungamiro dzekuenda kuBotus dzinotora vashanyi vasingatarisirwi kune dzimwe nzvimbo dziri kure kuti vorove kana kuvabata
Mukati kwete-kure-kure, mapurisa akafa squads akauraya nhengo dzechikwata uye dzimwe mhombwe mumhirizhonga inouraya
Iwe unogona kukwereta munhu anotora amateur kuti auraye mumwe munhu kudarika US $ 50
Kana iwe uchifunga kuti inzwi iri pamusoro apa rinopera, funga zvakare. Zvinhu zvakadaro zvakaitika - uye zvinoramba zvichiitika - muTrujillo. Asi ndiro guta iro vatashanyi vokune dzimwe nyika vanofanira kudzivisa?
A Diamond muRough
Chaizvoizvo, Trujillo inzvimbo yakamira kumhenderekedzo yekuchamhembe yePeru uye imwe iyo vatashanyi vose vanofanira kushanyira kana vachikwira kuchamhembe kubva kuLima.
Pane nyaya dzekuchengeteka uye nzvimbo dzine dambudziko raunoda kuziva, asi zvakafanana zvinogona kutaurwa kune dzakawanda maguta makuru ePeru uye munyika yose.
Vatashanyi vazhinji vanobva Trujillo vasina chinhu kunze kwezviitiko zvinofadza. Kana iwe ukashingaira nekuchenjerera uye zvidzidzo zvekuchengetedza, hapana chikonzero nei iwe uchifanira kupinda mumatambudziko chero ipi zvayo kana uchigara.
Mazano Okuramba Akachengeteka muTrujillo
Mazano anotevera achakubatsira kugara wakachengeteka zvose mukati meguta reTrujillo uye paunoshanyira nzvimbo dzakasiyana-siyana dzekushanyirwa:
Hakusi kunyanya kunetseka pamusoro penzvimbo yezvakaitika kare yeTrujillo, kunyanya mukati mezuva. Ichokwadi kuti kubatwa kwepamberi kunowanzoonekwa muPeru , saka tarisira kune zvikwata zvepakiti munzvimbo dzakapoteredza uye chengetedza chikwama chako uye zvinhu zvinodhura (kamera, laptop, etc.) zvakavanzika sezvinobvira. Kana iwe uchitakura bhegi rezuva, ramba wakabata zvakasimba pairi uye usamborega kuzviisa kunze kwako.
Ita chiyeuchidzo chikuru usiku. Kunyange zvazvo iyo Plaza deArmas uye iyo inopoteredza migwagwa yakawanda yakachengeteka mushure mesiku, iwe unofanirwa kuramba uchingwarira pane zvaunenge uchitarisana uye usapinda mumigwagwa isina chinhu. Dzivisa kugumburwa zvakapoteredza doro munguva yekutanga.
Nhoroondo yekodhi inowanikwa mukati meyenderedzwa yeAvenida España (iyo inotevera nzira yeguta rekare remasvingo). Kana ukangoyambuka kuAvenida España kubva munharaunda inonzi historic, iwe unopinda mudiki kutarisa uye kunowedzera zvishoma nzvimbo dzakachengeteka dzeguta racho. Inzwa wakasununguka kutsvaga mumigwagwa pakarepo kubva kuAvenida España, asi nyatsoteerera kana iwe uchitarisa kure kure neguta rekare - kunyanya usiku.
Kune dzimwe nzvimbo dzakanakisisa dzekudyara kunze kwenzvimbo yepakati, yakadai saDon Rulo cevicheria naEl Cuatrero Parrillada . Nzira yakachengeteka uye yakajeka yekusvika kwavari ndeye imwe yeTrujillo yakawanda mitekisi. Nguva dzose shandisa kambani yakakurudzirwa tekisi; hoteli yako inogona kukwanisa kutumidza teksi yakavimbika panzvimbo yako.
Mahombekiti mumugwagwa wepamutemo anogona kunge akadhura, asi zvakakosha kubhadhara zvishoma pane zvekugara kune hotera yakanaka iyo inopa mazinga akareba ekuchengeteka. Hotel Colonial neLa Hacienda zvose zviri zviviri zvakanaka, zvisingakwanisi kusarudza zvishoma chete mabheji kubva pachikumbaridzo chikuru.
Zvizhinji zvezvitsuwa zveTrujillo zvinowanikwa kunze kweguta. Iwe unogona kuvashanyira ivo pachavo kana nesangano rekushanyira riri mukati meguta.
Kana uri kutsvaga mutungamiri wekushanyirwa, usavimba nehurongwa husina kujeka uyo anovimbisa kukuendesa kunzvimbo shomanana dzinozivikanwa pedyo nenzvimbo dzakakurumbira dzezvokuchera matongo zvakadai seHuaca de la Luna kana Chan Chan .
Zvinogona kunge zvichitengesa kukuendesai kune imwe nzvimbo iri kure kunobatwa kana kubatwa chibharo. Pakati pese, batanidza nevatori vanofambira vanozivikanwa vane mahofisi munharaunda yezvakaitika kare kana avo vanokurudzirwa nehotera yako.
Unogona kusvika kune zvakawanda zvezvivako zveTrujillo zvakasiyana-siyana, asi usatsauka kubva munzira yakatsika. Kana iwe ukatora combi (minibus) kubva pakati peTrujillo kuenda ku Huaca de la Luna kana Chan Chan, somuenzaniso, enda panopindwa muchengeti uye uwane mutungamiri wepamutemo mukati. Iva nehanya nemafambisirwo asina kukodzera kunze kwemukova mukuru.
Chimwe chinogona kukanganisa chinouya mushure meSan Pedro-proffering shaman. Aya shaman mazano anozivikanwa kupa sangano reSancherolic psychedelic kuvashanyi; mutambi wacho anobva ava nyore kuvhara - kana kuipa - panguva yemascaline-induced highs inokonzerwa nekare cactus concoction. Zvinonyadzisa zvakadaro zvinowanzoitika muHuanchaco, guta rinozivikanwa riri pedyo negungwa pedyo neTrujillo.
Tarapoto kuTingo Maria Road
Dambudziko reMarabi Kune Vafambi muPeru
Electricity muPeru: Outlets uye Voltage
Inyika Isina Kudzidziswa - North Peru Ichifamba Nzira
Inca Kola, Soft Drink yePeru yePeru
Miviri Yakanakisisa Inobva kuCopenhagen
Nhamba yeEngland yeAll Falls Inotyisa uye Kutasva Nhandare
Kushanyira Texas State Aquarium
8 Mazano Okuona Bhora Drop muAkapakati Yemazana
Kid-Friendly Restaurants ku Phoenix
Nzira Yokuita Nayo Safari Yakaisvonaka muAfrica Zvimwe Zvingawedzerwa
The Crossing Purchased by Hyatt
Chiremba chekare cheSpain muNorth Miami Beach
Kubva kuNorth kunowanikwa kwakasiyana-siyana Festivals neZvambo
Kuramba muNzvimbo yeMitambo muUnited States
Imbwa uye Hot Weather